China Power milina makarakara anatiny Manufacture sy Factory | Chuliuxiang
Ampidiro ao anaty grille bbq elektrika ianao, angony ireo akora ary apetraho ny latabatra.
Mora ny mahandro miaraka amin'ny grill elektrika CLUX. Avereno fotsiny ny dial mari-pana mankany amin'ny sear. Rehefa mahatratra 450 degre ny mari-pana mandrehitra, dia hamirapiratra ny jiro maitso mialohan'ny hafanana. Ankehitriny ianao dia vonona ny hanendasa steak, burgers, henan-kisoa na fillet trondro ho tonga lafatra. Raha te hanendaka sakafo izay tsy mila sery aloha ianao, dia ampiasao ny mari-pana azo amboarina mba hanendasany amin'ny hafanana ambany.
SETTINGS TEMPERATURE: Ity giro elektrika ity dia miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana, ahafahanao manitsy mora foana ny mari-pana mahandro manomboka amin'ny 0 ° F ka hatramin'ny 300 ° F mba hahazoana ny habetsaky ny fahavitrihana tonga lafatra tianao.
COOKING SURFACE: Ity grill contact ity dia miaraka amin'ny grill tsy mipetaka. Ny takelaka griddle dia mety amin'ny pancakes, atody ary bacon; Ny takelaka makarakara dia afaka mahazo marika grill tena izy amin'ny taolan-tehezana, steak ary trondro.
FIAROVANA FAHAFAHANA: Ity grill BBQ elektrika ity dia misy fanjaitra mari-pana, hampiato ho azy ny hafanana raha toa ka avo loatra ny hafanana anatiny. Ankoatr'izay, ny fitaovana fiarovana amin'ny hafanana roa dia mahatonga azy io ho azo antoka kokoa ny fampiasana azy.
Mora manadio: Ny coating tsy miraikitra dia manamora ny fanadiovana ny takelaka makarakara amin'ny famafazana malefaka. Ny takelaka makarakara, ny vilany fanangonana menaka ary ny fonon'ny fantson-drano dia azo esorina ary azo antoka amin'ny fanasan-damba. FANAMARIHANA: Mety hiova loko ny lovia mitete ao amin'ny fanasan-damba, azafady diovy amin'ny tanana.
teo aloha: Gasy fandrahoan-tsakafo ivelan'ny trano
Manaraka: Stainless vy 4 fandoroana entona grill
grille elektrika barbecue
grill elektrika an-trano
Grill tsy mifoka sigara anatiny
gilasy elektrika tabletop
Fanamboarana barbecue elektrika an-trano